Author Topic: Rekha Thapa (रेखा थापा) Nepali Actress (Read 271580 times)
« Reply #80 on: March 15, 2010, 01:46:46 PM »
'तिमीलाई हेरुँहेरुँ लाग्छ...'
काठमाडौ, चैत्र २ - हेमजास्थित झोलुंगे पुलमा नायिका रेखा थापा नायक आयुष रिजालसँग पोजमा पोज मिलाउँदै थिइन् । 'सडक' फिल्मको गीत 'तिमीलाई हेरूँहेरूँ लाग्छ...' को छायांकन हुनु रहेछ । गर्मी सुरु भइसकेको छनक नायिकाको पहिरनले दिइरहेको थियो, उनको त्यो लुकले भने रमितेहरूको दिलमा गर्मीकै अनुभव गराइरहेको थियो । उनी गीतझैँ देखिइरहेकी थिइन्, 'तिमीलाई हेरूँहेरूँ लाग्छ...' ।
पहिरन निकै ग्ल्यामरस छ नि भन्ने जिज्ञासामा नायिकाले अनुहारमा हाँसो पोतिन् र भनिन्, 'कथाले मागेको यही हो ।' उनले के पनि सुनाइन् भने कथाले नमागे पनि उनी छोटो र खुला पहिरनमा आफूलाई सहज अनुभव गर्छिन् ।
आयुषसँग तालमा ताल मिलाउँदै रेखा नाच्न थालिन् । नायक घरिघरि झुक्किँदा यसो गरौं उसो गरौं भन्दै पोज सिकाउन पनि थालिन् । नृत्यनिर्देशक कविराज गहतराजले पनि यसमा सहज अनुभव गरिरहेका थिए । 'नृत्यमा अब्बल रेखाकै कारण कुनै पनि नृत्य निर्देशकलाई सजिलो महसुस हुन्छ,' उनले भने ।
केही दिनदेखि फेवा नगरीमा छायांकन भइरहेको प्रदीप श्रेष्ठ निर्देशित 'सडक' को यो गीत नायक आयुषले नायिका रेखालाई देख्नेबित्तिक्कै मन पराएपछिको सिक्वेन्समा थियो । रेखा सुटिङ अवधिभर थरिथरिका हट पहिरनमा देखिइरहिन् । सुटिङ स्पटमा सर्वसाधारणको भीड थियो । उनीहरू नायिकाको उत्तेजक हाउभाउ नियाल्न ठेलमठेल गर्दै थिए । बेलाबेला सट लिनसमेत हम्मे परिरहेको थियो ।
पोखराकै हरि बराल, पवन प्रजापती तथा पदम माकाजू निर्माता रहेको चलचित्रमा सडक बालबालिकाको मनोदशा देखाउन खोजिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । आयुष सडक बालकको भूमिकामै छन् ।
« Reply #81 on: March 22, 2010, 12:32:38 AM »
« Reply #82 on: March 24, 2010, 01:08:59 PM »
रेखा र विराजबीच विवाद
24/03/2010 04:04:00 Naya Patrika
निखिलपछि अब रेखाको दूरीमा बस्ने पालो विराजको
पहिला खुबै मिल्ने नायिका रेखा थापा र नायक विराज भट्टबीच पछिल्लो चरणमा विवाद चर्कंदै गएको छ　। उनीहरूबीच विवाद बढ्नुमा 'म के कम ?' भन्ने भावना कारक तत्त्व बनेको छ　। विराज आफू केही फिल्मबाट निकालिनुमा रेखा नै दोषी देख्छन् भने रेखाचाहिँ आफूले स्थापित गरेको मान्छेले आफ्नैविरुद्ध कुरा काट्दै हिँडेको र अव्यावसायिक बेहोरा देखाएकाले रुष्ट भएको बताउँछिन्　।
नायिका रेखाले अर्का नायक निखिल उप्रेतीसँग मनमुटाव भएपछि आफ्नो फिल्म हिम्मतमा विराजलाई नायक लिएकी थिइन्　। हिम्मतपछि नै हो विराज नायकका रूपमा जमेका　। त्यतिवेला रेखाले विराजको निकै सिफारिस गर्थिन्　। तर, विराज यो कुरा भने मान्न तयार छैनन्　। उनको भनाइ छ, 'रेखाको सिफारिसले मैले कुनै पनि फिल्म पाएको छैन　। बरू मैले सिफारिस गरेर रेखालाई थुप्रै फिल्म दिलाएको छु　।' रेखा भन्छिन्, 'कसैले नलिएको मान्छेलाई मैले रि-ब्रेक दिएँ　। अहिले उसैका कुरा ठूला ? दुनियाँलाई थाहा छ, मैले विराजलाई कत्तिको सहयोग गरेकी छु भन्ने　।'
किस्मत फिल्ममा रेखाले नयाँ हिरो आर्यन सिग्देललाई ब्रेक दिइन्　। हिफाजतमा आर्यनसँगै आयुष रिजाललाई हिरो बनाइन्　। 'आफ्नो धरातल बिर्सने मान्छेलाई कति भाउ दिनू ?' विराजप्रति इंगित गर्दै रेखा भन्छिन्, 'त्यही भएर विकल्प खोजेकी हुँ　। मैले ल्याएका आर्यन र आयुष विराजभन्दा कुनै कुरामा पनि कम छैनन्　।' विराज रेखाको यो तर्क पनि मान्न तयार छैनन्　। भन्छन्, 'निखिल र मजस्ता हिरो उनीसँग खेल्न नमानेपछि नयाँ हिरो त खोज्नै पर्‍यो नि　! नयाँ भाइहरूसँग फिल्म खेलेर कहिले उँभो लाग्नू ?' रेखाको तर्क पनि दह्रो छ, 'यो वर्ष विराजले मसँग खेलेका बाटुली र आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ दुईटा फिल्म मात्र हिट भए　। उनले अरूसँग खेलेका ११ वटा फिल्म फ्लप भएका छन्　। त्यही भएर उनी मसँग फिल्म खेल्न लालायित छन्　।'
केही समयअघिदेखि विराजले नायिकाको रूपमा जेनिशा केसीलाई सिफारिस गर्दै आएका छन् भने रेखाले आयुष र आर्यनको सिफारिस गर्ने गरेकी छिन्　। २७ चैतदेखि रेखाको फिल्म हिफाजत मुलुकभरि एकैसाथ प्रदर्शन हुदै छ भने विराज र जेनिशा अभिनीत भागी भागी नजाऊ मोफसलका हलबाट प्रदर्शन हुँदै छ　। नायिका रेखा हिफाजतबाट नायक आयुषलाई स्थापित गराउने धुनमा छिन् भने विराज भने भागी भागी नजाऊबाट नायिका जेनिशालाई स्थापित गराउन हरसम्भव प्रयासमा लागेका छन्　।
हिफाजतमा रेखा र भागी भागी नजाऊमा जेनिशा सोलो हिरोइन छन्　। विराज भन्ने गर्छन्, 'अब रेखाको टक्कर जेनिशासँग पर्ने भो　। जेनिशाले सबै हिरोइनलाई खाइदिन्छे　।' तर, रेखा भन्छिन्, 'मेरो टक्कर सीधै विराज भट्टसँग हो　। अरूको मलाई मतलब छैन　।' पछिल्ला दिनमा विराज र रेखाबीच विवाद बढ्नुको प्रमुख कारण हो यो　।
विराजले आफू सडक, च्यालेन्ज, इसारालगायत फिल्मबाट निकालिनुलाई रेखाको षड्यन्त्र ठान्छन्　। रेखा भने विराजले आफूलाई निराधार आरोप लगाउने गरेको बताउँछिन्　। 'मैले कसैको पेटमा लात हानेको छैन,' उनी भन्छिन्, 'मैले त जहाँ पनि उनकै सपोर्टमा कुरा गर्ने गरेकी छु　। उनी भ्रममा छन्　।' विराज आफू नेपाली मात्र नभई भोजपुरी फिल्ममा समेत व्यस्त भएकाले 'आफँैले फिल्म छाडेको' बताउने गर्छन्　।
« Reply #83 on: March 28, 2010, 12:52:38 PM »
सुमन गैरे, काठमाण्डौ, २०६६ माघ २०, मंगलवार
« Reply #84 on: April 20, 2010, 06:44:51 AM »
« Reply #85 on: April 26, 2010, 01:04:34 AM »
aaba jhan Rekhale maile bihe garya 6ena bhanne halla pitirahe ko6k ho k ho !!!
« Reply #86 on: October 28, 2011, 01:00:45 PM »
रेखा थापा, नायिका (October, 2011)
अहिले म परिवारसँग बसेर आफ्नो दिदीको घर क्षेत्रपाटीमा तास खेलिरहेको छु । कति रुपैंया पोईन्ट भन्ने त मलाई पनि यस्तो याद छैन । तर निकै रमाईलो भईरहेको छ । तर, तिहार मनाउनका लागि भने म आफ्नो घर मोरङ नै जान्छु । परिवारसँग बसेर आफ्नो दाईलाई टीका लगाईदिन्छु । यसपटक म सागर -काठमाण्डौका वाईसियल ईन्चार्ज) दाईलाई टीका लगाउन पाउँदिन । किनकी, उहाँको यसपटक टीका लगाउन नहुने भएको छ । तिहारमा देउसी भैलो खेल्दै लक्ष्मी पूजा गर्न मन पर्छ । यमराजले भाइटीकाको दिनमा लिन आएका आफ्ना भाइको संरक्षण यमुनाले गरेकी थिईन् । यसकारण, पनि हामी दिदी भाइका लागि यो पर्वको महत्व अत्यन्तै धेरै रहेको छ । तिहारमा झिलिमिली बत्ती बालेर देउसी भैलो खेल्न आएकाहरुसँग रमाईलो गर्न पनि मलाई मन पर्छ ।
« Reply #87 on: January 11, 2012, 12:47:15 PM »
That means -- mom told not to divorce for now...
She means - she was close to divorce -> it's postponed for now => something like "Let me findaright boyfriend than I will decide"
« Reply #88 on: February 24, 2012, 10:32:51 PM »
काठमाण्डौ, २०६८ फाल्गुन ११, बिहिवार
हाड विनाको जिब्रो कहिलेकाहीं लडबडाउछ तर त्यो लडबडाईमा अरु कसैले सजग गराई दिंदा धन्यवाद दिनुको साटो उल्टै जंगिदा उक्त मानिसलाई कसरी हेर्ने ?
सायद रेखाको आजकाल ग्रहदशा ठिक छैन होला त्यसैले पनि यिनी आजकाल विभिन्न कन्ट्रोभर्सीमा फसिरहेकी छिन् । पति छवि ओझासंग डिभोर्स हुँदैछ भन्ने खबर सेलाउन नपाउदै रेखाको अर्को चर्चा योग्य कुरा बाहिर आएको छ । रेखालाई बोल्न आउदैन । अतः भनौ रेखाको मन आजकाल ठीक ठाउँमा छैन त्यसैले 'साथी म तिम्रो' को म्यूजिक लन्चमा जव उनी बोल्न भनेर पोडियममा पुगिन् तव उनले भुवन केसीको तारिफ मुक्त कण्ठले गरिन् ।
सुरुमा रेखाले भुवन केसीलाई महानायक भनी सम्बोधन गरिन् । राजेश हमाललाई दिएको महानायकको पद उनलाई मन पर्दैन त्यसैले भुवन केसीको योगदान सिनेमा उद्योगमा धेरै छ भन्दै उनले भुवनलाई महानायकको पद दिदै भुवनको काम र फिल्मी ब्यबहारको खुलेरै तारिफ गरिन् । तारिफको रफ्तार बढ्ने क्रममै उनको जिब्रो यसरी चिप्लीयो कि उनले भुवन केसीले यो क्षेत्रमा धेरै शताब्दी विताईसक्नु भयो भन्दा हलमा केहि सञ्चारकर्मीहरू हाँस्न थाले ।
आफू बोलीरहेको बेला सञ्चारकर्मीहरू हाँसिदिंदा रेखालाई रिस उठेछ क्यारे हल्का रिस देखाउँदै भनिन्, 'तपाईहरु चुप लागेर बसिदिनुस मन पर्दैन भने यू क्यान गो आउट ।' यति भन्न नपाई सञ्चारकर्मी तथा कलाकार सन्दिप सापकोटाले शब्द गलत भएको भन्दै सुधार्न आग्रह गरे । रेखाले पहिला त थ्यान्क्यू भनिन् तर रिस भने रोकिएन ।
रेखाले बोल्ने क्रममा यस्तो भनेकी थिईन्, 'भुवन केसीलाई म महानानायक भन्न रुचाउछु किनकी यो क्षेत्रमा उहाँले धेरै शताब्दी विताईसक्नु भएको छ । उहाँसंग काम गर्न नुपाउनु मेरो अहोभाग्य हो ।' ४७ बर्षे सिनेमा उद्योगमा भुवनको योगदान तीन दशक मात्र हो तर उनले सयौं बर्षको योगदान छ भनी तारिफ गर्दा सो बिषयले कार्यक्रम माहोलमा केही बेर तनाव उत्पन्न भएको थियो ।
रेखाले शताब्दी र दशक छुट्याउन नजान्दा उनले बोलेको बिषयमा विवाद भएको हो । रेखा जस्तो नायिकाले उक्त बिषयलाई गल्ती भयो भनी स्वीकार गरेको भए विवादको कुरा हुदैन थियो तर विवाद प्रसङ्गमा रेखा थप आक्रोसित भैदिदा सानो बिषयले अर्के मोड लिदा रेखालाई बोल्न आउदैन रहेछ भन्ने बहस कार्यक्रम अवधिभर चलेको थियो । हाड नभएको जिब्रो चिप्लिएपछि राम्रो हुन खोज्दा खोज्दै पनि नराम्रो हुनुको पिडा रेखालाई बोध पक्कै भएको छ । त्यसैले रेखा जि अब बिचार पुर्‍याउनुस् है !
« Reply #89 on: March 19, 2012, 05:27:03 AM »